Diddaa Barattootaa deeggaruu fi gochaa mootummaa balaaleffachuun itti fufe
Date: December 10, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, 11 Mudde 2015) Hawaasti Oromoo biyya alaa keessa jiraatan Diddaa Barattootaa Oromoo deeggaruun hiriiraa fi walgahii gaggeessaa jiru.
Hawasti Oromoo kunneen qophiilee kunneen irratti gochaa mootummaan Itoophiyaa barattootaa fi ummata karaa nagaa mirga isaa gaafachaa jiru irratti fudhachaa jiru balaaleffachuutti jiru.
Hiriirtoti biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti hiriira Queen’s park gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
Hiriirtoti biyya Kanaadaa magaalaa Calgaryitti hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
Hiriirtoti biyya Kanaadaa magaalaa Edmontonitti hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
Hiriirtoti biyya Ameerikaa magaalaa Washington DCitti hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
Hiriirtoti biyya Ameerikaa Minnesota magaalaa Minneapolisitti hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
Hiriirtoti biyya Germany magaalaa Frankfurtitti 10th December 2015 hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
Hiriirtoti biyya Ingiliz magaalaa Londonitti hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
Hiriirtoti biyya Norway magaalaa Bergenitti hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii jiru.
‪#‎OromoProtests‬ public forum in Johannesburg in solidarity with our heroic people fight the brutal regime. They have raised 200,000 Rand to support those being victimized by the Ethiopian regime
Hiriirtoti biyya Masirii magaalaa Kaayirooitti hiriira gaggeessan irratti barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii
Hiriirtoti biyya Keenyaa magaalaa Naayiroobiitti walgahii gaggeessan barattoota Oromoof kabajaa fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Yeruma kan gocha amootummaa Itoophiyaa abaaranii
Previous Previous post: Barattooti Oromoo Bilisummaaf Wareegaman
Next Next post: OPDO Qormaata Maastara Plaanii Kufe.